Dhismaha - Jiangxi Prototek Imp&Exp Co., Ltd.
Prototek waxay leedahay khibrad aan la qiyaasi karin oo ku saabsan wax ka qabashada caqabadaha warshadaha dhismaha. Qalabkeena, softiweerka iyo xalalka adeegyada waxay ka caawinayaan shirkadaha inay horumariyaan qaybo miisaan fudud si ay hoos ugu dhigaan kharashaadka wax soo saarka, naqshadaynta iyo soo saarista shirar cusub oo yareeya tirada qayb isla markaana bixisa xoog iyo hufnaan weyn.
Xigasho khadka tooska ah sida ugu dhakhsaha badan 1 maalmood!
Prototek waxay la shaqeysaa shirkadaha dhismaha si ay u fududeeyaan silsiladooda saadka oo ay si firfircoon u cabbiraan awoodooda wax soo saar. Waxay kala shaqaynayaan EBI si ay u dhisaan silsilad sahayda baahida mustaqbalka oo aan xad lahayn oo la miisaami karo si ay si degdeg ah suuqa ugu galaan.
Codsiyada Dhismaha Guud
Prototek waxaa ka go'an in ay bixiso wax soo saarka iyo adeegyada ugu wanaagsan ee dhismaha lndustries. Iyada oo leh injineero khibrad leh iyo nidaamka kormeerka adag, taas oo noo ogolaanaysa inaan noqono alaab-qeybiyaha ugu weyn uguna xasilloon macaamiisheena. Tani waa badeecadaha aan bixin karno:
fur-qaab gaar ah
Xidhayaasha la habeeyey
Qalabka & Nakhshad Alaabta leh 3D CAD
Qaybaha Valve Pump
Qaybaha Cnc ee Iibka, Cnc Soo Saaraha Qaybaha Rogsaday, Alaabta Cnc, Qaybaha Saxda ah ee Cnc, Qaybaha Spindle-ka, Adeegga Cnc ee jaban,